जान्नुहोस् चिसोमा लाग्ने ६ रोग र बच्ने उपाय
Visit rara lake in Nepal.
कर्णालीका यूवा पर्यटन अभियान्ता रोकाया भिजिट नेपाल २०२० मा नियुक्त
व्यवस्थित सुन्दर ठमेल वनाउनको लागी कोषध्यक्षमा उम्मेद्धारी – रामकुमार थपलिया
जडिबुटी र पर्यटन कर्णाली बिकासको मुल आधार
कर्णाली पर्यटन उद्दमी समाजको अध्यक्षमा जगबहादुर बुढा चयन ।
कर्णाली प्रदेशमा ठूलो रकम ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा (भिडियो सहित)
संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७४, आईतवार २२:१२ प्रकाशित मिति : जनवरी 28, 2018
चिसो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । तराई क्षेत्रमा चिसोले दुई दर्जनभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । यसैले पनि पुष्टि गर्छ कि अत्यधिक चिसो स्वास्थ्यका लागि जोखिमयुक्त छ । चिसो मौसममा स्वास्थ्यको उचित ख्याल राखेनौँ भने विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । यी हुन् चिसोमा लाग्ने रोग र त्यसबाट बच्ने उपाय :
डा. तृष्णा कर्ण
जाडो मौसममा धेरै मानिस जोर्नीको दुखाइबाट ग्रसित हुन्छन् । कतिपयलाई त दुखाइको कारण बेड रेस्ट नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ ।
बच्न : यसबाट बच्ने उपाय भनेको जोर्नीहरूलाई चिसोबाट बचाउनु र नियमित व्यायाम गर्नु हो ।
चिसो (मौसमी फ्लु)
बाहिरी वातावरणअनुरूप परिवर्तन हुने प्रकृति मानव शरीरको हुँदैन । यसैको कारण हो, मानिसलाई अत्यधिक तातो वा चिसोको महसुस हुने । चिसो मौसममा शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता घट्न जान्छ र विभिन्न जीवाणुको संक्रमणले बिरामी पार्छ ।
बच्न : चिसोमा शरीरलाई न्यानो बनाउन आवश्यक हुन्छ । तापजन्य खाद्यपदार्थ खाने, हिँडडुल कम गर्ने, खाना खानुअघि र पछि राम्रोसँग साबुनपानीले हात धुने, नाक मुख छोपेर राख्ने, मास्क लगाएर हिँड्नेलगायतका गतिविधि गर्नुपर्छ ।
चिसो मौसममा भाइरल संक्रमण हुन्छ । जसले घाँटी खसखस हुने, सुक्खा पार्ने गर्छ ।
बच्न : यस्तो समस्या भएमा तातो पानीमा नुन राखेर मुख कुल्ला गर्नुपर्छ । त्यसका साथै आराम गर्ने, चिसो खानेकुराको प्रयोग नगर्ने गर्नुपर्छ ।
चिसो मौसममा मानिसमा देखिने अर्को समस्या भनेको छालामा फुस्रोपना हो । यस्तो वेला सुक्खा हावा लाग्छ र शरीरको पानी उडेर जान्छ । चिसोको वेला शरीरमा पानीको मात्रा पनि कम हुन जान्छ । जसले गर्दा छाला र ओठ फुस्रो हुने र फुट्ने समस्या हुन्छ ।
बच्न : चिसो मौसममा अत्यधिक पानी पिउने गर्नुपर्छ । त्यस्तै मोस्चराइजिङ क्रिम, नरिवल, आलमन्डको तेल छालामा लगाउनुपर्छ ।
जाडो मौसममा हृदयाघातको सम्भावना बढी हुन्छ । चिसो मौसमका कारण मुटुलाई रगत पु¥याउने नलीहरू खुम्चिन जान्छन् । जसले गर्दा मुटुको मांसपेशीमा रगतको मात्रा कम हुन्छ । कहिलेकाहीँ मुटुको मांसपेशी नष्ट हुन जान्छ र रगत पम्पमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । जसले हृदयाघातको समस्या बढाउँछ ।
बच्न : मुटुरोगीहरूले धेरै चिसोमा काम गर्नु हुँदैन । नियमित व्यायामलाई पनि दिउँसोको समयमा सार्नुपर्छ । सकेसम्म शरीरलाई न्यानो बनाएर राख्नुपर्छ । देब्रे भागको छाती दुखेमा भने तुरुन्त चिकित्सककहाँ जानुपर्छ ।
चिसो र सुक्खा हावाले श्वासनलीलाई पनि साँघुरो पार्ने काम गर्छ र मानिसको श्वासप्रश्वास प्रणालीमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा दमको समस्या बढ्न जान्छ ।
बच्न : यसबाट बच्नका लागि घरलाई धुवाँ, धुलोमुक्त गराउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, समय–समयमा ओछ्यान घाममा सुकाउने र सफा गर्ने गर्नुपर्छ । बाहिर हिँडडुल गर्दा पनि धुलोबाट जोगिन आवश्यक हुन्छ ।
हामीलाई तपाई फेसबुकमा यहाँ, ट्विटरमा यहाँर युट्युवमा यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ
पछाडि पट्टि प्वाल परेको पाइन्ट लगाउँछन् चिनियाँ बच्चा, यसको कारण यस्तो छ !
अन्धकारमा पनि प्रकास छर्छन् यीनी
डा‍. टेड्रोसले सम्हाले ‘डब्लुएचओ’को नेतृत्व, यस्ता छन् ५ प्राथमिकता
१९ असार २०७४, सोमबार १७:१३
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निमित्त निर्देशकमा डा केसी नियुक्त
१९ असार २०७४, सोमबार १७:१२
गठबन्धन हराउँदै एमालेका छत्रपति बने फुङलिङ नगरको मेयर
१८ असार २०७४, आईतवार १०:५१
समाज विकासको पूर्वाधार सकारात्मक र समाधानमूखी सञ्चार भन्ने मूल नाराका साथ हामी तपाईंहरुका माझ आएका छौं । पत्रकारिता भनेको समस्या ऊजागर गर्ने मात्र होइन समाधानको विकल्प दिने औजार पनि हो । रारा सञ्चार अनलाइन प्रा.ली मार्फत सञ्चालित www.rarasanchar.com यही मूलमन्त्रका साथ तपाईंहरु माझ सञ्चालनमा रहेको छ ।
हाम्रो प्राथामिक्तामा जहिले पनी कर्णालीका ५ जिल्ला अगाडी रहनेछन् त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ६ सहित देश तथा बिदेशका बिभिन्न खबर तथा जानकारी यस अनलाइनमा राखिनेछन् । हामी समाजमा रहेका विविध खाले समस्या र तिनको समाधानको खोजी गर्नेछौं । यसका साथै वैचारिक विविधता खोजमूलक सामग्री र गाउँनगरका जनसरोकारका समाचार विश्वसनीयताको कसीमा खारेर छिटो छरितो रुपमा पस्कनेछौं ।
सञ्चालक तथा अध्यक्ष : देविकृष्ण रोकाया
सल्लाहकार : सुमन मल्ल
सम्पादक : श्याम बिसी
कार्यकारी सम्पादक : रत्नसिहं रोकाया
अतिथि सम्पादक : नन्द बहादुर रोकाया
कला र साहित्य : हिरा बिजुली नेपाली
Copyright © 2019 Visit rara lake in Nepal.. Powered by Manjil.